Imboni Yezisetshenziswa Zokuhlola Ezingenisiwe - I-China Abakhiqizi Bezisetshenziswa Zokuhlola Ezingenisiwe, Abahlinzeki
I-DRK8636 I-Colorimeter yokuqhathanisa
Izilinganiso zombala ze-Luo Wei Point ziyiyunithi ekhethekile yokuhlukanisa i-chrominating, okuwulimi olulula kakhulu noluphelele kakhulu lombala wedijithali.Ngakho-ke, ingakwazi ukukala imibala ehlukahlukene kalula, okulula ukuyiqonda.
I-DRK8063 I-Optical Rotator ezenzakalelayo
Imiphumela yokulinganisa okuzenzakalelayo kwebhalansi ye-photoelectric isetshenziswa, futhi imiphumela yokulinganisa okuzenzakalelayo iboniswa ngamakristalu e-dot matrix liquid.Igcina kokubili i-DRK8060, DRK8062 ezinzile futhi enokwethenjelwa, ukuzwela okuphezulu, akekho oyiphutha.
I-DRK8011 Digital Melting Point Pen
I-abbeder refractometer iyithuluzi elikwazi ukunquma uketshezi olubonisa ngale, oluguquguqukayo, noma inkomba eqinile ye-refractive ND kanye nokuhlakazwa okuyisicaba kwe-ND-NC (okungokuyinhloko okuyilapho uketshezi olubonisa ngale ikakhulukazi lukhona).
I-DRK6902W Abbe Reflector
I-Australian IDM, ithuluzi lakhiwe futhi lakhiqizwa yi-Australia IDM, ikakhulukazi esetshenziselwa ukuhlola amathuluzi asongwe ngephepha, nazinikele.
Ama-tensile ahlukene afana ne-British Schuman, yasekhaya yaseBrithani 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 ingahlola ngokunembile ukuthi ukungezwani okungaphezulu kwefilimu yepulasitiki kufinyelela inani lepeni lokuhlola.Vumela umsebenzisi aqonde le filimu ukuthi ifanele yini ukuphrinta.